Degso IObit Unlocker loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (2.38 MB)
Degso IObit Unlocker,
IObit Unlocker waa barnaamij yar oo faaiido leh oo kuu ogolaanaya inaad tirtirto faylashaada iyo fayl aad isku dayday inaad tirtirto laakiin aad ku adkeysato in aan la tirtirin Barnaamijka tirtiraya fariimaha qaladka ah Lama tirtiri karo feylka, Helitaan La Diiday, Faylkan waxaa lagu isticmaalaa barnaamij kale waa - habka ay u shaqeyso - aad ayey ugu egtahay Unlocker.
Ka dib rakibid gaaban, barnaamijku wuxuu si otomaatig ah isugu dhejiyaa liiska midig-gujinta. Sidaa darteed, waxaad si dhakhso leh u dooran kartaa ficilka lagu qaadayo adoo gujinaya midig-gubaya faylasha iyo fayllada aad dhib ku qabtid tirtirka. Barnaamijka, waad furi kartaa oo tirtiri kartaa, furmi kartaa oo magacaabi kartaa, furmi kartaa, guuri kartaa ama nuqul kartaa faylka dhibaatada leh. Haddii aad rabto, waad furi kartaa oo tirtiri kartaa faylasha la soo xulay adigoo furaya barnaamijka oo gujinaya badhanka Add. Waxaad ka heli kartaa sharraxaadda sawir ee barnaamijka, hubi cusbooneysiinta, waxaadna ka heli kartaa taageero xagga farsamada adoo adeegsanaya habaynnada menu ee barnaamijka, oo bixiya taageerada luuqadda Turkiga.
Fiiro gaar ah: Intaad rakibayso barnaamijka, Qalabka toolbar ikhtiyaarrada rakibidda ayaa la siiyaa, waxaan kugula talineynaa inaadan ku dhejin qalabka wax lagu baaro ee aan loo baahnayn nidaamkaaga adoo gujinaya Skip.
IObit Unlocker Noocyada
Cabirka Faylka: 2.38 MB
Wararkii Ugu Dambeeyay: 06-07-2021